7 Best Glamping Nzvimbo In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Best Glamping Nzvimbo In Europe
Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 11/04/2021)
Kumuka kushiri dzichiimba, ne mukare maonero kubva pasuo rako, mune yurt yepamusoro kana imba yemuti. Kubwinya munzvimbo dzakanaka kwazvo muEurope chiitiko chikuru mazuva ano. Inotevera 7 nzvimbo dzakanakisa dzekupenya muEurope dzinopa inoshamisa eco-hushamwari zororo ruzivo rwekunyaradza. Nemagetsi girini, marara, uye 5-nyeredzi hotera perks, glamping ndiyo yekupedzisira nzira inoenderera yekuzorora muEurope.
1. Best Glamping Nzvimbo In Europe: Veluwe Natural Reserve MuNetherlands
Kenduru yekudya kwemanheru mumasango anonakidza eVeluwe, kufamba kumusoro pakati pemiti ine yekutanga zuva mwaranzi. Ichi chikamu chese chekurota glamping chiitiko mune yekutanga national Park muNetherlands. Unogona kusarudza kuongorora 2 zvisikwa zvisikwa: Veluwezoom National Park with the most beautiful viewpoint the Posbank, kana Hoge Veluwe, paradhiso yevanofarira kukwira makomo.
Yenguva yakanakisa munyika idzi, iwe unogona kusarudza kugara mune yakanaka yurts, safari matende kana dzimba dzemiti, glamping pekugara sarudzo muVeluwe. Semuyenzaniso, Schenkenshul kuchengetedza nzvimbo, pedyo neHoenderloo, ndiyo nzvimbo yakakwana ye musasa wemhuri, tisingaregi pane zvekumba-zvivakwa uye nyaradzo.
Brussels kuAmsterdam Ine Chitima
London kuAmsterdam Ine Chitima
Berlin kuAmsterdam Nechitima
Paris kuAmsterdam Nechitima
2. Echologia Glamping Spot MuFrance
Kumahombekombe kwenzvimbo yakachengetwa yemvura muMayenne, iwe unowana inoshamisira pekugara-yakanaka. Mumupata weLa Loire unogona kusarudza kugara mukamuri inoyerera, kabati remusango, kana tende reumbozha.
Kudya kwemangwanani padhorobha, chikepe murwizi, kana kunakidzwa negirazi rewaini ingori mashoma eanowanikwa iwe aunowana kana uchinge warova pano. La Loire mupata ndiyo nzvimbo yewaini muFrance, saka, waini dzakanakisa dzenzvimbo ingori nhanho shomanana kubva kutende rako remhando yepamusoro kana kabhini. Echologia inzvimbo huru yekupenya ye Solo vafambi muFrance, uye mhuri vanozorora.
Nantes kune Kuratidzwa Nechitima
Lille kuTress Ine Chitima
Lille kuParis Nechitima
3. Best Glamping Nzvimbo In Europe: Yekudanana Glamping MuRhone-Alpes France
Kurara pasi penyeredzi, kudziya nechitofu kana kuchinaya kunze, maAlps eFrance inzvimbo yemashiripiti. Iyo Rhone nharaunda muFrance Alps ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekupenya muEurope. saka, unogona kuve neyako chaiyo yechando fairytale zororo mune yakasarudzika green dome kana bhero tende.
zvisinei, kana uchida zororo remuchirimo, ipapo uchanyatsoda maAlps ari kubuda. Kuva nekofi yako yemangwanani, yakakomberedzwa nemusango, chimwe chezviitiko zvakanakisa muhupenyu. Pamusoro pe, yezororo rinoshanda zvakanyanya, unogona kukwira kumusoro kumakomo akaisvonaka kana kuyedza kukwikwidza muArdeche River.
Sezvo iri pakati peItaly neFrance, iwe uchaona zviri nyore kwazvo kuenda ikoko nechitima.
Paris kuProvence Nechitima
Lyon kuProvence Nechitima
Marseilles kuProvence Nechitima
4. Kupenya muCentral Bohemia, Prague
Bohemia inzvimbo yemakadhi muCzech Republic. Kusarudzika kwayo kuri munzvimbo yenzvimbo yekushandura mapfekero nekuchinja kwemwaka. Muzhizha iwe uchaiwana iri girini uye yakawandisa, and in the fall in beautiful golden and orange tones. On the banks of a lake, makomo marefu, kana sango rakavanzika, Bohemia's oasis ingori awa kubva kuPrague, saka unogona kunakirwa nezvakanakisa zvepasirese, mumoyo wechisikigo.
Kune yakawanda glamping pekugara kutenderedza Lipno nyanza kana padyo neJizera makomo. saka, iwe unogona kunakidzwa yakatanhamara yedziva uye masango maonero, kubva kunzvimbo yako, kana yakavanzika inopisa tabhu mune zvakasikwa.
5. Best Glamping Nzvimbo In Europe: Luxury Glamping Pods MuSwitzerland Alps
Yakanakisisa ski materu, maonero akanaka, ipo chaipo pasuo rako rekubwinya. The Swiss Alps inzvimbo yemashiripiti chero mwaka, uye ikozvino unogona kugara pakati chaipo. Ipo maSwiss Alps ari nzvimbo inozivikanwa yezororo yevashanyi vanobva kumativi ese epasi, vashoma kwazvo vanoziva nezvayo senzvimbo inopenya.
Iyo glamping pekugara muAlps yakashongedzerwa zvakakwana uye yakagadzirirwa kunyarara, uye kunoshamisa kugara. Unogona kugara pakati pemachando echando, asi mukati meimba yako yepamusoro, kuchadziya uye kunotonhora. Unenge uri kumuka kunzvimbo dzinoyevedza, uchienda kunokwira wakananga kubva pamubhedha wako wakasununguka, mushure mekudya kwemangwanani kunonaka.
Nzvimbo, mweya mutsva, uye nzira dzakasiyana-siyana dzinoita kuti Swiss Alps ive imwe ye 7 nzvimbo dzakanakisa dzekupenya muEurope.
Zurich kuWengen Nechitima
Geneva kuenda kuWengen Nechitima
Bern kuWengen Nechitima
Basel ku Wengen Nechitima
6. Yemahara Glamping Tende MuPuglia
Inowanikwa padyo nemakungwa eAdriatic neIonia, Puglia ndeye nzvimbo ine kurota yezororo rakanaka kwazvo muEurope. Ruzha rwemafungu, yakachena bhuruu mvura, mhepo yemanheru, uye chikafu cheItaly, inogona kuwana chero zvirinani kupfuura izvi. kunyange zvazvo, glamping in an luxury tent, kunakidzwa nezvinodiwa muhotera, pasina kukanganisa bhajeti yako – Glamping ndiyo yekupedzisira nzira yezororo mazuva ano.
Puglia inzvimbo inoyevedza yekupenya, kubuda mutende rako kuenda kumahombekombe kana pamusoro pechikomo chakatarisana negungwa, kurota kweumwe munhu. Iwe uchawana yakawanda glamping pekugara sarudzo muApulia musha.
Iyi oasis pagungwa inosvikika nechitima kubva kuRoma neBari.
Roma kuenda kuPuglia Ine Chitima
Naples kuenda kuPuglia Nechitima
Bari kuPuglia Nechitima
Florence kuPuglia Nechitima
7. Kudanana Uye Kufara MuTuscany
Romance ndiro izwi rinotsanangura yakanakisa glamping muTuscany. Kwete kure neSienna, uye gungwa reMediterranean, muzvikomo zvevelvet zvakasvibirira zveTuscany, inomirira matende erudo uye egirini ezororo re 2.
In Tuscany, unogona kuenda kunotsvaga truffles, take a cooking class and prepare pasta for dinner. Nerumwe, unogona kutenderera uchitenderedza misha yakanaka yeItari kubva kune yako Simbe Yemuorivhi Inopenya nzvimbo. Uyezve, glamping muTuscany inoita kuti unzwe uri chikamu chechisikigo, yakananga kuseri kwemiti yemiorivhi.
Florence kuna Grosseto Nechitima
Perugia kusvika Grosseto Nechitima
Viterbo kuna Grosseto Nechitima
Roma kuGrosseto Nezvitima
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga yako zororo kune iyo 7 yakanakisisa glamping nzvimbo muEurope nechitima.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "7 Yakanakisa Glamping Nzvimbo MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-glamping-places-europe%2F%3Flang%3Dsn‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
BestGlampinginEurope musasa GalmpingPlacesInEurope glamping GlampingDestinationsEurope GlampingPlaces LuxuryCampingEurope matende Winterholiday
Chitima Kufamba, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Travel Europe